Guud ahaan laba aragtiyood ayaa ii soo baxay: Mid leh dagaallada sokeeye waxaa dhaliya oodhinacyada is haya kiciya, colaaddana sii holciya damac iyo hunguri; iyo mid taa kaga duwan siday colaaddu ku bilaabanto, kalase mida siday ku dambayso. Haddaba, anoo aan sii dhex muquuranayn doodda tafaasiisheeda hoose, nuxurka aniga iiga soo baxay doodahaa iyo daraasadahaa wuxuu yahay inay colaadaha sokeeye, say u badanyihiin, maraan jaranjaro laga bartay colaadihii sokeeye ee Lubnaan, Angoola, Siiraaliyuun, Koongo, Afqaanistaan, Koolombiya, Guwaatemaala, Beeruu (Peru), Soomaaliya, iyo kuwa kale oo la mida.
Colaadda sokeeye waxay, sida qaalibka ah, ka unkantaa dawladda oo gabta xilka ay shacabkeeda u hayso. Xukunka dawladda ayaa waxaa maroorsada oo isku kooba ruux ama koox, kuwaasoo kutakrifala hantida dawladda iyo khayraadka ay dadku wadaagaan. Hay’adihii dawladda,xidhiidhadoodii, iyo xeerarkoodii rasmiga ahaa ayaa caynwareega oo macna beela, waxaana halkoodii gala xidhiidho iyo is-fagaradya hoose oo aan la qorin lana shaacin, kuwassoo ku qotoma eex, naas-noojis, iyo kala-gudbin. Dawladdii waxaa kasoo hadha qalfoof iyo hummaag dawladeed (shadow state).1 Dabadeed waxaa lama huraan noqda in dadweynaha badidii ay u muuqato inay dawladdii sagratay. Markay dadweynuhu isku dayaan inay cawdaanna xadhig iyo cabbudhin bay dawladdu kula kacadaa. Hadda bal bartaa aynu ku yara hakanno.
lakala aamminsanyahay kase durugsan runta. Caqiidadaasi waxay ku salaysnaan kartaa diin, sidaLubnaan, ama kala-sarrayn dhaqan-dhaqaale, ama hayb qabiil sida tan Soomaalida oo kale. Kaalinta kuwa macaashaka ka daya siyaasaddu ay ku yeesahaan dagaallada sokeeye waxaa tusaale fiican u ah siduu dagaalkii sokeeye ee Siiraaliyuun ku bilawday iyo siduu isu rogey. Wuxuu ku bilawday kacdoon ay horseed ka ahaayeen arday xaq-u-dirir ah, waxaase kala wareegey kooxo aan damac iyo hunguri mooyee wax kale deeqin.4
1) Libta oo koox raacda, kooxdaasoo kooxaha kale wixii ay damacsanayd ku sandulleysa(asymmetrical victory);
Damaca iyo hunguriga dadku kama wada sinnaadaan, isku sina uguma wada macaashaan.Horboodayaasha kooxaha ayaa waxay dhisataan nidaamyo boob iyo tala-maroorsi ku dhisan. Waa nin iyo taagtii! Haddana, saasoo ay tahay, bal car yaa runta sheega oo afka ku kala qaadi kara sidanayba iigu badisaa!
Akhristow yaan hadal kugu daalinnine, bal maxay kula tahay baa innaga khuseeya xaaladdan ayaqoonyhannadaan hoos ku xusay bayaamiyeen?
Haddaan dhinac kale ammuurta uga wareego, bal aynu dib ugu laabanno labadii reer ee deriska ahaa aanse isku qabiilka ahayn. Reerkiiba saddex carruura ayay xabbaddu leeftay, darxumada haysataana waa sidii hore iyo si ka daran. Adeegya ay dawlad ka helaanna haba sheegin. Labadaa reer waxay kala raacsanyiin laba maammul. Khad cagaaran baa dhex yaal. Mid kastana waxaa weli ka dhaadhacsan laguna aqriyaa caqiidadii aynu hore uga soo hadallay, caqiidadaas oo ku beertay milil iyo hurgumo.Waxay u baaban yihiin oo u faruurxidhanyihiin cisaabado isku xidhan (siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba ) oo aan marnaba oggolayn isbeddel dhaba oo ummadda isu keeni kara.